RAVELOSON CONSTANT : RAHA HANAO FIFIDIANANA DIA TOKONY HISY FITONIANA ETO – MyDago.com aime Madagascar
RAVELOSON CONSTANT : RAHA HANAO FIFIDIANANA DIA TOKONY HISY FITONIANA ETO
Mbola namafisin’ny Ct Raveloson Constant ny zavatra voalazany tamin’ny Alarobia teo androany teny amin’ny Magro Behoririka. Ny tenin-dRamatoa Lalao Ravalomanana hoe fitsapana sy fisedrana ho zakaiko raha ny fandrahonana atao ahy hirotsaka ho fidiana fa tsy misy misintaka izany eo hoy Constant. Raha ilay vahiny nandalo teto hoy izy dia ny fanontaniana dia hoe tena hanao fanelanelanana ve izyireo sa hanao kaka be maso fampitahorana ny ankizy.. Fantany tsara hoy izy fa Ramatoa Lalao Ravalomanana dia tsy ny filoha Ravalomanana. Fantany tsara fa tsy misy olombelona eto sakanana amin’nytaniny azo hanaovana didy jadona. Fantany tsara fa tsy misy olombelona azo sakanana ao amin’ny taniny ka raha tonga any aminy ianareo dia tsy mahazo manao politika. Mipetraka ny fanontaniana hoy ity mpanao politika ity hoe fa inona no tadiaviny? Fantany tsara fa tsy misy izany hoe Lalao Ravalomanana hisintaka izany. Vahoaka an-tapitrisany hoy izy no ahilika miaraka aminy. Fantany tsara ny tondrozotra ary ao amin’ny andininy misy hoe miverina eto ny filoha Ravalomanana ary fantany fa ilaina miverina teo izy amin’ny fifampidinihana, fa tsy nasiany maodiny izany. Enga anie hoy Constant ka nahazo ny hafatra avy eny Ivandry, Faravohitra izyireo. Ho antsika samy Malagasy hoy izy raha hanao fifidianana dia tsymaintsy misy fitoniana eto. Ilay miatsaravelantsihy miaraka izy telo lahy ao Ivato ary milaza fa tokony ho tonga ny filoha Ravalomanna nefa ny miaramilanao aty ivelany manao sinema eny Ivato , tsy hoe fiarovana ilay olona ao anaty fiaramanidina fa fandrobana. Raha milaza ianao fa tsy maintsy tonga eto ny filoha Ravalomanana dia izy no mandamina ny olony ary ny adidin-dRajoelina dia ilay nampatsiahivin’ny filoha Tanzaniana hoe hankinina aminao ny fiarovana ny ainy amin’ny maha filoham-pirenena azy. Tontosan-dRajoelian ve izany hoy Constant. Tokony mba hiteny an’I Christine izy hoe aza mba mahasosotra ohatra io ianao fa izaho hifampidinika, fa ilay fitsarana nataontsika teto dia fitsarana politika famelivelena olona fotsiny. Raha mbola tsy miteny izany Rajoelina hoyizy dia tsy mbola izy izany. Momba ny jeneraly milaza fa efa mahafantatra ny vaovao mahakasika ireo hanakorontana raha tonga ny filoha Ravalomanana dia nambarany fa fantatr’ialahy izany ka tsy samborina sa ireo teny Ivato ireny no izy. Atolory an-dRachris izany olona izay dia ho hita eo. Misy fitsarana eto hoy Constant ary milaza azy ho fitsarana tsy azo ivalozana ka raiso ary ny andraikitrareo fa efa milaza hoe fantatrareo ireo olona ireo. Nanentana ny vahoaka ihany koa ny tenany hanangana ny komity mampifidy an’i Lalao Ravalomanana any amin’ny fokontany rehetra any.
Auteur Solo Razafy*Publié le 13 juillet 2013 13 juillet 2013 Catégories Politique
7 pensées sur “RAVELOSON CONSTANT : RAHA HANAO FIFIDIANANA DIA TOKONY HISY FITONIANA ETO”
13 juillet 2013 à 18 h 34 min
FIFIDIANANA NA TSIA ,ampy izay ,HADABOHY I RAJOELINA ,hatao ny fifidianana avy eo ,Mangataka an i Zafy ,Ravalomanana ary Ratsiraka hanainga ny vahoaka .
14 juillet 2013 à 2 h 35 min
momba anao mintsy aho ry michel ny fanasitranana ny ratsy dia ratsy ihany ny fanafodiny…
14 juillet 2013 à 9 h 27 min
« Vahoaka an-tapitrisany hoy izy no ahilika miaraka aminy » ??????
Matoa miziriziry amin’ny heviny ireo izay lazaina fa « mpanelanelana », dia satria tsy hitan’ny masony izany vahoaka an-tapitrisany izany !!!
Ho avy ny sazy, ary indray andro any ianareo dia tsy maintsy voatery hivoaka avy tao amin’io toerana io ! Hiandry dimy sa firy taona ? Atramin’izao aloha ny sasany dia mbola variana amin’ny fikarakaràna an’ireo izay hirotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka, ny fifidianana aza toa tsy hisy akory !
I Neny koa aza hono toa tsy mahafantatra ny anaran’izy ireo akory ! Fa nahoana ? Ary mba inona no antony haniliana an’Ingahy Manoela, izay tsy avela hirotsaka ? Tsy maintsy olona manana vola be any amin’ny bankiny angaha vao mahazo mirotsaka ry Madama mpahay Lalàna, fa toa hoe ianao hono no mandidy sy manapaka ?
Mba mila fanazavàna ny mpanohana ny ara-dalàna !
14 juillet 2013 à 23 h 04 min
MAHONENA Wah eeeeeeeeeeeee
mbola ho ela isika ity eeeeeeeeeeee
efa voahozona angah eeeeeeeee
Dia izay izany koa inona indray?????
SAMY MANAO IZAY MAHADIAVOLANA NY FOn’i LA FRANTSA izao no » la mode ».
MATY ANTOKA RAHA TSY MANARAKA IZANY eeeeeeeeeeee
TARITINA HILENTIKA ANY @ FARA-HANTSANA MIHINTSY DAGO FA MBOLA TSY TENA TAFALENTIKA
MIJOROA RY NENY REHEFA OLONA TSY HITA FIAVIANA DIA TSIPAO AMKITSIRANO MBA TSY AHAVOA
ANTSIKA TOY IZAO INTSONY a!!!
TSY mahagaga raha i Manoela no ahilika fa miteny ny sary e!!!MISY RAHA AO !!!tsisy hanaovana ilay zavatra
nampianarin’i MPANJANAKA MBOLA TOMPOINA eeeeeeeeeeeeeee
14 juillet 2013 à 23 h 19 min
Dia atao ahoana koa no hanakinana ny ain’i dada @’ity olona tsy adala tsy hendry
sady olom-boahozona toy ity domelina hono???koa tsy manao azy hoe « io ajedao?? »
Mody adala sa tena VONGANY daholo itony olona no manaikinaiky foana ,zavtra toy izany???
Tsy mahagaga rahatoa ka tsy mbola hita atramin’izao izany vahoaka an-tapitrisany izany !!
Ireto marina ve ny mpitarika ? Toa misy mpanao baolina kalàza, niara-nilalao tamin’i domelina teny Mahamasina ??
Misaotra @’ilay vao2 TSARA vao maraina lesy a!
Tiako be ilay hazakazaka madinidinik’i Neny @’ilay video.
Mazava be koa ilay vao voalaza fa » ao @ MPITARIKA NY ANKOAFY MIHINTSY NO TENA OLANA SY SAKANA
ny @ FODIAN’I DADA ».
Ity resaka antoko vao2 ity dia raha ohatra ka haniliana ireto MPISOLELAKA izay tsy nisy hita oa dia OK !!!fa saingy
efa misy FOZAFOZA nandehandeha tany @ FOZA sahady ilay izy koa ( INONA INDRAY NO PAIKA @’IO eeeeeee??
GUY RIVO!mbola anisany ny mbola HANTENAINA IANAO KA TANDREMO SAO LATSAKA ANATY VOVOM-POZA e!!!
rehefa mbola madio ianao dia DIOVY KOA IREO AKAIKINAO IREO dia HADIO NY ANTOKOVAOVAONAO IO.
MBOLA MANANTENA ANAO IZAHAY ANDRIAMATOA GUY RIVO na dia efa lasa koa aza i GUY RALAISEHENO.
AZA AVADIKAO KOAA I DADA FA MANANTENA ANAO NY ZANANY eeeeeeeeeMISAOTRA TOMPOKO!!!!
Précédent Article précédent : Fihaonan-dRamatoa Lalao Ravalomanana sy ny GIC-M : Samy nitana ny heviny
Suivant Article suivant : Razakanirina Mahafaritsy Samuel : « Miovaova hevitra be loatra ny Sadc »